Hihaona amin'ny LaCie 2big Dock, tobin'ny docking miaraka amin'i Thunderbolt 3 | Avy amin'ny mac aho
Hihaona amin'ny LaCie 2big Dock, tobin'ny docking miaraka amin'i Thunderbolt 3
Javier Porcar | | maro
Hatramin'ny nanombohan'ny Apple nampiasa teknolojia Thunderbolt 3 dia nanomboka namoaka kapila haingam-pandeha ny indostria. Na eo aza ny vidiny lafo dia tsara ho an'ireo matihanina izay mikirakira data maro be. Taty aoriana dia nihaona tamin'ireo tobin'ny docking izay niasa ho kapila mafy, serivera na NAS, miaraka amin'ny Thunderbolt 3 ihany izahay.
Ankehitriny, ny mpitarika ny teknolojia fitahirizana LaCie, fantatra amin'ny anarana hoe 2bao Dock, mitondra any an-tsena tobin'ny docking, mahazaka kapila fitahirizana lehibe, izay mitondra zava-baovao lehibe. Izy io dia manana slot hametahana karatra fahatsiarovana amin'ny endrika samihafa, natao manokana ho an'ny asan'ny mpaka sary sy ny matihanina momba ny audiovisual.
Ny Dock 2big dia tsy dia be loatra toy ny docking station raha oharina amin'ny vokatra mifaninana hafa. Na aiza na aiza, ny asany lehibe indrindra dia ny fiasa ho toy ny singa afovoany ao amin'ny drafitra asa nomerika an'ny matihanina amin'ny sary.
Lazainay izany, satria amin'ny lafiny ratsy amin'ity vokatra ity, tsy manana seranana Ethernet, na output optika izahay. Noho izany, tsy azontsika ampiasaina amin'ny solosaina izay tsy manana seranan-tsambo Thunderbolt 3. Fa kosa, manana mpamaky karatra Compact Flash, slot misy karatra SD ary seranana USB-A, mety amin'ny fampifandraisana lakile amin'ny Pen, kapila mafy na telefaona, ary sintonina avy eo ny fampahalalana mifandraika.
Mikasika ny fanatontosana ireo vokatra, mametraka seranan-tsambo Thunderbolt 3 roa. Ity no ampahany ahafahantsika mametraka ny ekipantsika ho ivon-tsiranoka. Azontsika atao ny mampifandray ny Dock 2big amin'ny efijery misy 1080p na vahaolana 4K, amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo DsiplayPort ary afaho ny seranan-tsambo Thunderbolt amin'ny iMac na MacBookPro. Tamin'ny farany, manana port USB-C ho an'ny fifandraisana mahazatra kokoa.
Noho izany, azontsika atao ny mahafeno an'ity kapila ity ho rafitra RAID. Ny hafainganam-pandehan'izy ireo dia manodidina ny 480MB / s amin'ny famakiana sy ny fanoratana. Izy io dia afaka mandefa horonantsary 4K sy 5K amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'izany.
Mahatratra 20GB ny fahaizan'ity kapila ity, miaraka amina kapila RAID 0 1.000. Ny sarany dia 20 € ho an'ny kapila 16GB. Raha tsy mila izany fahaiza-manao betsaka izany ianao dia afaka mankany amin'ireo kinova hafa: 929TB amin'ny € 12, 772TB amin'ny € 8 ary 615TB amin'ny € XNUMX
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Hihaona amin'ny LaCie 2big Dock, tobin'ny docking miaraka amin'i Thunderbolt 3
Apple manavao ny "Carpool Karaoke" ary hisy ny vanim-potoana faharoa
Ny fandikana voalohany ny Apple Glasses amin'ny ho avy dia mampatsiahy antsika Atoa Magoo